परिवार - Ningbo BestCleaner कं, लिमिटेड
एक परिवार सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न? माँ अझ बढी सन्तोषजनक छ, जस्तै बाल थप राम्रो छ र Dady थप खुसी छ? किन पार्टी पकड छैन? कृपया चिन्ता छैन, BVC तपाईं सबै सफा जब समाप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। ।
तपाईंले साथीहरूसँग धेरै छ र उनीहरूलाई चकित गर्न चाहन्छु, किन तिनीहरूलाई BBQ पार्टी होस्टिंग द्वारा चकित? तपाईंको गंदा घर केही राम्रो साथीहरूसँग आफ्नो समय रमाइलो लिन को बाटो मा प्राप्त गरौं गर्छन्। कुनै तनाव, बस-गर्न-सजिलो हासिल कार्यहरू - यहाँ तपाईं आफ्नो घर सफा गर्न मद्दत गर्न5चरण योजना छ।
त्यसैले जहाँ सुरु गर्न? एक BBQ पार्टी लागि, अतिथि बाहिर आफ्नो अधिकांश समय, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू घरमा सफा गर्न त प्रवेश, खर्च गरिनेछ छन् जीवित कोठा, भान्सा र बाथरूम। पार्टी बाटो ध्यान बरु सम्पूर्ण घर सफा गर्न तर आवश्यक छैन - सबै भन्दा मानिसहरूको ध्यान आफ्नो पेय सेट गर्न टेबल, समतल र स्थानहरू हुनेछ।
यसको सजिलो, बस5कदम:
1 ताजा र आफ्नो घर Declutter।
सुरु गर्नु पहिले, केही Windows खोल्न यो ताजा र सफा Smells त आफ्नो घर बाहिर हावा गर्न। एक सुगंधित मोमबत्ती प्रकाश वा deodoriser आफ्नो ठाउँ छिडकाव केही सुगन्ध थप्छ र मुड सेट गर्छ। अर्को यो अचाक्ली cluttered हो कि पार्टी मार्गमा कुनै पनि क्षेत्रमा निपटने समय छ। सबै अनावश्यक वस्तुहरू एक लाँड्री टोकरी जस्तै राख्नु वा सम्म पार्टी भन्दा छ सबै भन्दा राम्रो र सरल समाधान हो यी भण्डारण गर्न बक्स अस्थायी स्थानहरू पत्ता।
2. आफ्नो ढोका गेट सफा र प्रवेश
राम्रो पहिलो छाप बनाउन आवश्यक छ त्यसैले तपाईँको अतिथि देख्ने पहिलो कुरा आफ्नो प्रवेश छ। द्रुत कूचो लगाउनु बाहिर, रही कुनै पनि माटो को छुटकारा गर्छन्। त्यसपछि आफ्नो बाटो कुनै पनि अव्यवस्था खाली र दृष्टि बाहिर जूता, जैकेट, टोपी र मेल राख्दै, आफ्नो प्रवेश हल वरिपरि कूचो लगाउनु के भित्र बनाउन र। बन्द टेबल वा सजावटी धूलो र केही deodoriser स्प्रे।
3. जीवित कोठा Prepping
कुनै ठाउँ वस्तुहरू, सीधा पलङ्गमा, तकिये, तकियों र refolding बाहिर टिप्न सुरु फेंकता (ठूलो अप कवर कुनै पनि दाग लागि - तपाईं BVC उत्पादनहरु को कुनै पनि प्रयोग गरेपछि यो गर्न आवश्यक हुनेछ तर छैन) । अर्को एक Microfiber कपडा प्रयोग गरेर तालिका, टिभी स्क्रिन र अन्य धूल सतहहरु सफा। अन्तमा, भुइँमा कुनै पनि धूलो वा पाल्तु जनावर कपाल माथि निर्वात, र आफ्नो निर्वात गरेको ब्रश वा नली संलग्न प्रयोग गरेर आफ्नो झालर बोर्ड सफा गर्न बिर्सनु हुँदैन।